Umaka: izindaba ze-instagram | Martech Zone
Tag: izindaba ze-instagram
UKhetha: Isebenzisa i-AI ukuguqula amafomethi wokunikezwa kwevidiyo
Uma ngabe uke wakhiqiza futhi waqopha ividiyo obufisa ukuyibonisa kuyo yonke imithombo yezokuxhumana, uyazi umzamo odingekayo wokutshala ifomethi ngayinye yevidiyo ukuqinisekisa ukuthi amavidiyo akho ahlanganyela kungxenyekazi okwabelwana ngayo. Lesi yisibonelo esihle lapho ubuhlakani bokufakelwa nokufunda ngomshini kungenza umehluko ngokweqiniso. UKamua usungule isihleli sevidiyo esiku-inthanethi esizosika ividiyo yakho ngokuzenzakalela - ngenkathi sigxile kokudingidwayo - ngaphesheya
Ungazakha Kanjani Ukubukeka Okumangazayo Kwezindaba ze-Instagram
NgoLwesihlanu, Septhemba 18, 2020 NgoMgqibelo, Septhemba 19, 2020 Hardik Oza
I-Instagram inabasebenzisi abakhuthele abangaphezu kwezigidi ezingama-500 usuku ngalunye, okusho ukuthi okungenani uhhafu wesisekelo somsebenzisi jikelele sokubukwa kwe-Instagram noma ukudala izindaba nsuku zonke. Izindaba ze-Instagram ziphakathi kwezindlela ezinhle kakhulu ongazisebenzisa ukuxhumana nezithameli zakho ezibhekiswe kuwe ngenxa yezici zayo ezinhle ezihlala zishintsha. Ngokwezibalo, amaphesenti angama-68 weminyaka eyizinkulungwane athi abuka ama-Instagram Stories. Ngenombolo ephezulu yabasebenzisi abalandela abangane, osaziwayo,
I-Xara: Dala Imibhalo Yokumaketha Ebonwa Ngamehlo Ngemizuzu
NgoMgqibelo, ngoMashi 16, 2019 NgoLwesihlanu, Mashi 15, 2019 Douglas Karr
Alukho usuku oludlulayo engingasebenzi ku-Illustrator, Photoshop, naku-InDesign futhi ngihlala ngikhungathekile ngokungabi bikho kokuvumelana kokunikezwa kwethuluzi ngalinye. Ngithole inothi elivela eqenjini eXara esontweni eledlule ukuthi bathathe injini yabo yokushicilela kwi-inthanethi bazoyivivinya. Futhi ngihlatshwe umxhwele impela! I-Xara Cloud iyithuluzi elisha lokuqamba elenzelwe abangasunguli elenza ukuthi kudaleke ibhizinisi nokumaketha okubukwayo nobungcweti
Nalu uhlu olukhulu lwezibonelo zezindaba ze-Instagram nezifundo ezenziwa ngamacala
NgoLwesithathu, Okthoba 31, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sabelane ngendatshana eyedlule, Konke Odinga Ukukwazi Ngezindaba ze-Instagram, kepha imikhiqizo ikusebenzisa kanjani ukushayela ukumaketha nokuthengisa? Ngokusho kwe- #Instagram, 1 kwezingu-3 zezindaba ezibukwa kakhulu zivela kumabhizinisi Izibalo Zendaba ze-Instagram: Abasebenzisi abayizigidi ezingama-300 basebenzisa izindaba nsuku zonke ku-Instagram. Ngaphezu kwamabhizinisi angama-50% ku-Instagram enza indaba ye-Instagram. Ngaphezulu kwe-1/3 yabasebenzisi be-Instagram babuka izindaba ze-Instagram nsuku zonke. 20% wezindaba
NgoLwesihlanu, Okthoba 12, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule ngangihlekwa obala ngisebenza nozakwethu online lapho ngangabelana ngemicabango yami ngevidiyo. Inkinga yakhe ngamavidiyo ami? Ngangibambe ifoni nkqo kunokuba ngiyibeke phezulu. Ubuze ubuchwepheshe bami nokuma kwami ​​embonini ngokususelwa ekuqondeni kwami ​​ividiyo. Kwakusangana ngenxa yezizathu ezimbalwa: Amavidiyo akhuluma ngekhono lawo lokuthwebula nokuxhumana nomyalezo. Angikholwa ukuthi ukujwayela kunomthelela